कपाल र नङ काट्दा किन दुख्दैन?
कपाल र नङ काट्दा आखिर किन दुख्दैन ? कपाल काट्दा दुख्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ तर किन दुख्दैन भन्ने थोरैलाई मात्र थाह हुन सक्छ । आउनुहोस जानौ कपाल र नङ काट्दा किन दुख्दैन Why does cutting hair and nails not hurt?
हाम्रो शरीर भित्र करिव १० देखि ५० trillion सेल्सहरु हरेको छन् । जसमध्य करिव ३०० मिलियन सेल्सहरु प्रत्येक मिनेट मर्दछन भने उतिनै नया सेल्सहरु पनि बन्दछन ।
विभिन्न सेल्सहरुले हाम्रो शरीर मा अलग अलग कामहरु गर्दछन । मानव शरिर मा करिव २१० वटा फरक फरक सेल्सहरु रहेको हुन्छ र यिनीहरुको काम पनि हाम्रो शरीर मा फरक फरक नै रहन्छ ।
नङ, कपाल वा रौँहरु हाम्रो शरिर भित्र प्रत्येक मिनेट मा मरेका करिव ३०० मिलियन सेल्सहरु को हिस्सा बाट बनेको हुन्छ । मतलब नङ, कपाल र रौँहरु भनेको मृत सेल्सहरुबाट बनेको हुन्छ र यो बन्नु को मुख्य कारण पनि मृत सेल्सहरु शरिर बाट बाहिर निस्किन लाइ हुन् ।
तर नङ बढेको छैन र मासु मा टासिएको नङ काटियो भने दुख्ने छ किनकी त्यो नङ मासु मा टासिएको हुन्छ जहाँ जिवित सेल्सहरु हुन्छ्न । तर बढेको नङ काट्दा भने हामिलाई दुख्दैन ।
यहि कारण कपाल रौँ र नङ काट्दा हामीलाई दुख्दैन किनकि यो दुखाई हुनको लागि त्यहाँ जीवित सेल्सहरु हुन जरुरी हुन्छ र ति जीवित सेल्सहरुले हाम्रो मस्तिस्क मा संदेश दिने गर्दछ तर यी मृत सेल्सहरु भएको कारण मंस्तिस्कमा कुनै प्रवाह हुन् पाउदैन र यहि कारण ले गर्दा हामिले नङ, कपाल वा रौँहरु काट्दा हामीलाई कुनै दुखाई हुदैन ।